yokuhamba elingenalutho idokhumende ejwayelekile. Imithethonqubo leli fomu lubalwa idokhumenti ngesimo T-10. He is isisekelo abasebenzi ibhizinisi wehlele ngezebhizinisi. Ukuma olukhethekile yokuhamba nalutho ikuvumela ukulandelela esikhathini sokuhlala abasebenzi (abasebenzi) ngomsebenzi. isikhathi sabo ezokufika e (kusuka) lapho uya khona.
Uma umsebenzi kumele ngesikhathi evakashele vakashela eyodwa, kodwa eziningana izinkampani noma izinhlangano ngamunye kubo wanyathela (cindezela) ngokufika noma ukuhamba (uphawu). Ngayinye yalezi emamaki zasayindwa ngumphathi noma omunye umuntu kule ibhizinisi ugunyaziwe ukwenza lokho, okuyinto wavakashela umsebenzi abasisiwe. Uma umsebenzi abasisiwe ukunikeza eyakheke kahle yokuhamba kungenalutho, yonke izindleko zezimali uhambo ke azikwazi ukutholakala. Ngaphezu kwalokho, umqondisi wale Eqinisweni angabelwa ukuba inkonzo uphenyo (ukuhlolwa), okumele ukuqinisekisa noma cha uqinisekise yokuthi sokuhlala umsebenzi ngomsebenzi kanye ukuvakashelwa kubo kukhonjisiwe yokuhamba izinhlangano.
Linqume ukuhamba isitifiketi ibhizinisi, njengoba umthetho, ogunyazwe izisebenzi ukuphoqelelwa isikhulu. Ngaphezu kwale dokhumenti, uku-oda ikhishwa, noma i-oda ukuthumela umsebenzi ngomsebenzi. Futhi kule oda (oda) futhi kumelwe ibe isisekelo sokukholelwa nesitatimende ngesimo ngomsebenzi.
Uma umsebenzi ebuya uhambo, azithathayo ukuze umzimba ifreyimu (noma eminye imigwamanda, okwakubekelwa wahlanganyela nomklamo walo) ukuhamba nge izimpawu. Ngaphezu kwalokho, ukuqedela inqubo umsebenzi okumelwe bahambe ukunikeza travel ishidi, ngezindleko umbiko fomu. Ukuze kuthuthukiswe umbiko bafaka amaphepha ingaqinisekisa zonke izindleko zezimali ngoba yebhizinisi (izincwadi zokungena kwamanye amazwe, namarisidi sokukhokha yokuhlala, njll).
Uma ubhalisa umsebenzi ngomsebenzi, qaphela ukuthi oda (oda) inikeza noma wenziwe yinhloko noma umuntu ogunyazwe ngoba. isikhathi sokuvakasha kungase kungabi izinsuku ezingaphezu kwezingu-40, ngaphandle isikhathi endleleni. Uma uhambo ihlobene ukukhishwa ukufakwa noma emsebenzini wokwakha, isikhathi singase siwathole unyaka. Ngaphezu kwalokho, wonke umsebenzi noma imisebenzi kudingeka ukugcwalisa umsebenzi ngokuhamba travel, kufanele akuphikisani yemfanelo yayo obusebenzayo lelipelwe kwinkontileka umsebenzi. Ungakhohlwa ukuthi ngezebhizinisi umsebenzi nazo zonke iziqinisekiso yomphakathi namazinga kuchazwe komthetho wezabasebenzi.
Kusukela yebhizinisi abasebenzi ukuphuma uma:
- owesifazane okhulelweyo;
- abasebenzi abangaphansi kweminyaka engu-18 ubudala (ngaphandle ubuchwepheshe yokudala);
- abasebenzi, abondliwa abangekho izihlobo ezigulayo;
- omama ekukhuliseni izingane kuze kube iminyaka emithathu noma ukunakekela izingane ezikhubazekile ngaphansi kweminyaka eyi-18.
Uma ifomu ikhishwa yokuhamba ukuba umuntu oyedwa, oda kufanele ikhishwe ngokuhambisana esime njengo-T-9. Uma uhlela ukuba athumele abantu abambalwa, bese oda isetshenziswa olunye uhlobo T-9a.
isitifiketi Okuhambayo kufanele ikhishwe ikhophi eyodwa.
Ngaphezu amalayisense, abasebenzi ukuqapha wenziwa umsebenzi okhethekile e inkampani ileja abasebenzi njengoba lisuka bese ifika kusuka uhambo. It esilotshwe kokubili izisebenzi zayo siqu kanye nabasebenzi abeza inkampani kusuka nezinye izinhlangano (amabhizinisi). Ngokuvamile ngokugcina journal ezinjalo kuba umsebenzi abanokwethenjelwa waziphatha ukubhalisa futhi izincwadi zokungena kwamanye amazwe.
Emazweni angu-15 nge eshibhe angisebenzi
HR umsebenzi - Umthombo oqondile okwandayo inzuzo ibhizinisi.
Yiziphi iziyalezo olusemthethweni umnakekeli
Amashingili «Tegola» - induduzo nokwethenjelwa
Inkohlakalo-izici - umqondo, izibonelo. Enqabela inkohlakalo Ubuchwepheshe
Izimpawu kanye nokwelashwa dysuria kubantu besilisa nakubantu besifazane. Dysuria - ke ...
APTT ephakanyiswe: okwenzeka kungani lokhu? Khulisa APTT ngesikhathi sokukhulelwa
Okuphansi Calorie skewers yengulube tenderloin: zokupheka kanye nemithetho ukupheka
Okwenza iphakethe "Ilungelo" Lokukhuluma VTB?